Damaca ciidamada Kenya ee Jubooyinka iyo dareenka feejigan ee dadka Soomaaliyeed (Warbixin)
Updated About:227 days ago 3
Kadib marki ay gacanta ku wada dhigtay magaalada Kismaayo Dowlada Kenya iyada oo huwan magaca AMISOM, ayaa waxaa soo baxay shakiyo ah in dalkeeda lagu soo dhisayo maamulka ka arrimin doono magaalada.
Horay waxaa u jiray walaac ay dadka Soomaaliyeed iyo Dowladoodaba ka qabeen Kenya in ay horhor u tahay qabsashada qeyb ka mid ah xeebta koonfureed ee Soomaaliya gaar ahaan xadka biyaha Kenya iyo Soomaaliya oo lagu sheegay shidaal iyo macaadin.
Waxaa horay u jiray maamul lagu magacaabo Azaania oo lagu dhisay gudaha dalka Kenya kaasi oo uu madax u yahay siyaasi la yiraahdo Maxamed Cabdi Gaandi oo kasoo jeedo Jubada Hoose, maamulkaasi waxaa si cad u wato Kenya.
Arrinta hada laga cabsi qabo ayaa ah in Kenya oo dadaal badan iyo dhiig ku bixisay sidi ay Al Shabab ugala wareegi laheyd magaalada Kismaayo ayaa ah in ay faraha la gasho arrinta maamul u sameynta oo ay ku cadaadiso Dowlada Soomaaliya in maamulka gobolka Loo dhiibo siyaasi ay iyadu raali ka tahay sida Gaandi ama wax la mid ah.
Kismaayo ayaa 20-ki sano ee lasoo dhaafay ka dhacay dagaalo faraha loogaga gubtay kuwaasi oo dhexmaray qabaa,ilka halkaasi daga oo isku laayey xakumida magaaladan dekada leh.
Hada waxaa laga cabsi qabaa in dagaalo kale ay ka dhacaan hadii la sameyn waayo maamul ka dhaxeeya dadka deegaanka oo ku dhisan cadaalad, todobaadki hore odayaal kasoo jeedo Jubada Hoose ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxay uga digeen in Kenya ay qas siyaasadeed ka sameyso maamulka gobolka ee la rabo in lasoo dhisho.
Afhayeenka ciidamada milatariga Kenya Colonel Cyrus Oguna ayaa sheegay in aysan dooneyn in dadka Soomaaliyeed ay u arkaan ciidanka Kenya xoogag gumeysi oo raba in Kismaayo ay xoog ku qabsadaan.
Wareysi uu siiyey wakaalada wararka ee Reuters ayuu ku sheegay in Kenyan ay la shaqeyn doonto maamul kasto oo loo soo magacaabo magalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolka.
Ciidamada Kenya iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ayaa hada ku sugan meel kasta oo Kismaayo ah, waxa marki hore ay Al Shabab kasoo weerareen bada, cirka iyo dhulka todobaadki lasoo dhaafay.
Guure says:	October 12, 2012 at 7:50 pm	Midkan hadiiba laso booday ogaadeenka maxay tahay cabsida kugu jirta ma waxad ka baqeysa marexan mise ogaadenka aya tuug ah ee doonaya wuxusan laheyn inay kenya siiso isaga maba qaadan karee
Reply	Noor says:	October 6, 2012 at 4:07 pm	Sxb waxaad mooda ninka qoray warkan nin riyoonaya kismaayo nin aan ogaden ahayn ma maamulayo kenya ana kaa wadan
Reply	Mohamed Omar says:	October 6, 2012 at 1:06 pm	kenya waa gumeeysi cusub oo dooneysa in ay kafaa ideysato dalkeena hooyo taasi wayna ku adkaandoontaa hoog iyo baaba ayaana kasoogaaridoono iinsha Allah